Google enyela ụbọchị maka njedebe nke ndakọrịta nke ụdị 2 nke ihe ngosi Chrome | Site na Linux
Ọchịchịrị | 24/09/2021 19:53 | Noticias
Google ewepụtala usoro iheomume nke ọ na -akọwa etu Nkwado maka ụdị 2 ga -ewere ọnọdụ site na Chrome gosipụtara na ihu ọma nke ụdị 3, nke abatala ọkụ maka imebi ọtụtụ plugins nchekwa ya na igbochi ọdịnaya adịghị mma.
Na mgbakwunye na ịgụnye ụdị nke ngosipụta nke abụọ, a na -ejikọ uBlock Origin mgbasa ozi a ma ama, nke enweghị ike ibuga ya na ngosipụta nke atọ n'ihi njedebe nkwado maka ọnọdụ mkpọchi nke webRequest API.
Site na Jenụwarị 17, 2022, plugins na -eji ụdị nke abụọ nke ngosi agaghịzi anabata na Weblọ Ahịa Weebụ Chrome, mana ndị nrụpụta ngwa mgbakwunye agbakwunyere ga -enwe ike biputere mmelite.
Na Jenụwarị 2023, Chrome ga -akwụsị ikwekọ na ụdị nke abụọ nke ngosi na plugins niile ejikọtara na ya ga -akwụsị ịrụ ọrụ. N'otu oge ahụ, a ga-amachibido izipu mmelite maka ụdị mgbakwunye a na Storelọ Ahịa Weebụ Chrome.
Tupu afọ a, maka Chrome 88, anyị kwupụtara na enwere ụdị ngosipụta ọhụrụ maka gburugburu ebe obibi ndọtị Chrome. Ọtụtụ afọ a na-eme, Manifest V3 nwere nchekwa karịa, rụọ ọrụ nke ọma yana ichekwa nzuzo karịa onye bu ya ụzọ. Ọ bụ mmalite nke ikpo okwu ndọtị nke na -eburu n'uche ọnọdụ mgbanwe weebụ na -agbanwe agbanwe na ọdịnihu nke ndọtị nchọgharị.
Ka anyị na -ele anya ọdịnihu ma na -aga n'ihu na -enyocha ma melite arụmọrụ nke Manifest V3, anyị chọkwara ịkekọrịta nkọwa na atụmatụ iji wepu ndọtị na Manifest V2.
Anyi aghaghi icheta nke ahu ụdị nke atọ nke ngosipụta, nke na -akọwa ike na akụrụngwa a ga -enye ya na plugins, dịka akụkụ nke ụzọ iji mee ka nchekwa na nzuzo sie ike, karịa webRequest API, nkwupụta NetRequest API, nke nwere oke ike, na -atụ aro.
Ọ bụ ezie na WebRequest API na -enye gị ohere ijikọ ndị njikwa nke gị ndị nwere ohere zuru oke na arịrịọ netwọkụ ma nwee ike gbanwee okporo ụzọ na ofufe, Nkwupụta NetRequest API na -enye ohere ịnweta injin nzacha site na igbe etinyere n'ime ihe nchọgharị na -ejikwa iwu mgbochi n'onwe ya. , nke na -anaghị enye gị ohere iji algọridim nzacha nke gị na anaghị enye gị ohere ịtọ iwu dị mgbagwoju anya nke jikọtara ibe ha dabere na ọnọdụ.
Ka ụbọchị ndị a na -abịaru nso, anyị ga -ekerịta nkọwa ndị ọzọ gbasara ụdị Chrome ezubere maka mgbanwe, yana ozi ndị ọzọ gbasara otu ndị nrụpụta ndọtị na ndị ọrụ nwere ike isi metụta ya.
Ka ọ dị ugbu a, anyị ga -aga n'ihu na -agbakwunye ikike ọhụrụ na Manifest V3 dabere na mkpa na olu nke onye nrụpụta anyị. Ọbụlagodi n'ime ọnwa ole na ole gara aga, enweela ọtụtụ ndọtị na -atọ ụtọ n'elu ikpo okwu ndọtị
Dabere na Google, ọ na -aga n'ihu na -arụ ọrụ na mmejuputa ikike nkwupụta NetRequest chọrọ na plugins na -eji webRequest, ma na -ezube iweta API ọhụrụ ahụ n'ụdị ga -egbo mkpa nke ndị nrụpụta ngwa mgbakwunye dị.
N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, anyị ga-ahapụkwa nkwado maka edemede ọdịnaya nwere ike ịhazi nke ọma yana nhọrọ nchekwa ebe nchekwa, n'etiti ike ọhụrụ ndị ọzọ. Emebere mgbanwe ndị a site na nzaghachi obodo n'uche, anyị ga -aga n'ihu na -ewu arụmọrụ Extension API dị ike ka ndị mmepe na -ekerịta ozi ndị ọzọ.
Ọmụmaatụ, Google eburula n'uche ọchịchọ obodo wee gbakwunye nkwado na nkwupụta NetRequest API maka ọtụtụ usoro static, nzacha regex, mgbanwe nke nkụnye eji isi mee HTTP, imezi na ịgbakwunye iwu n'ike, wepu na dochie paramita. Arịrịọ, nzacha taabụ. , na iwu akọwapụtara nke ọma maka nnọkọ.
N'ime ọnwa ndị na -abịanụ, a na -eme atụmatụ itinyekwu nkwado maka edemede nke ahaziri iche maka nhazi ọdịnaya yana ikike ịchekwa data na RAM.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya banyere ndetu, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Google enyela ụbọchị maka njedebe nke ndakọrịta nke ụdị 2 nke ihe ngosi Chrome